फिचर Archives - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
एक महिनाभित्र दरौँदी लिफ्टिङ वृहत खानेपानी आयोजनाको पानी गोरखा बजारमा आउने भनेर दुई बर्षअघि समाचार प्रकाशित, प्रशारित भयो । साना सहरी, तीनधारे, चाँपपानी, कणर्ेखोला लगायतका खानेपानी आयोजनाका पानी अपर्याप्त भइरहेका
हिमालपारिका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङका धेरैजसो ठाउँ सँधैजसो हिउँले ढाकिन्थे, दशक अघिसम्म । यो ‘रेन स्याडो जोन’ (पानी नपर्ने क्षेत्र) मा आजभोलि हिउँभन्दा पानी धेरै पर्छ । मुस्ताङको कागवेनी नेपालकै
मुग्लिन–आँबुखैरेनी–पोखरा सडकको पूर्वी खण्डमा ४ लेन सडक विस्तारको काम सुरु
गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन पोखरा खण्ड चार लेनको बन्दैछ । २०२६ सालमा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धुलिखेलमा जिपलाइन खेलको अनुभव लिएका छन् । नाति नातिनीसहित धुलिखेल पुगेका प्रचण्ड क्लासिक जिपलाइनमा सयर गरेका हुन् । साहासिक गतिविधिमा आफूलाई
दशैँ बिदामा गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाको भच्चेकमा आन्तरिक पर्यटक बढेका छन् । ‘पिच’ सडक भच्चेक जान सकिने भएपछि गोरखा सदरमुकाम, तनहूँ, चितवन, पोखरा लगायत ठाउँबाट भच्चेक घुम्न आउनेहरु बढेको स्थानीय बताउँछन्
वर्षातका कारण यात्रुले सोमवार र मंगलवार अन्य दिन भन्दा थप सास्ती खेप्नुपरेको छ । वर्षातले ग्रामीण सडक हिलाम्य छ भने गाडीको पर्खाईमा झरीमा रुझ्दै बस्नुपरेको गुनासो यात्रुको छ । गोरखाको
जब चाडबाड आउँछ अनि यात्रुहरु सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् । यात्रुहरु गन्तव्य पुग्न यो दशैंमा पनि दशकौं अघिको दशैंमा झैँ ठगिन बाध्य छन् । कोरोना महामारीको जोखिममा पनि ठेलमठेल